Malunga nathi - Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd.
Jiangsu Huanyi Imizi mveliso Co., Ltd.
I-Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd.yifektri entsha yetekhnoloji. Inkampani izinikele kuphuhliso lweemveliso zepakethe ye-ice ngobuhle bakho / esempilweni nakwezonyango / kwezokusongelwa kwezemidlalo / kukhathalelo lwasekhaya olupholisa unyango olushushu nolubandayo ukusuka ngo-2012.
Sinikezela ukuphumla, unyango lomzimba kunye noncedo lokuqala ebomini, iiMveliso ziqinisekisiwe nge-SGS, i-FDA, i-CE, i-REACH, i-AZO, i-PROP65, umzi-mveliso ophicotho lwe-BSCI, sinamava asebenzisanayo ne-LIDL, ALDI, Wal-mart kunye neDisney.
Inkampani ineemveliso ezininzi ezishushu zokuthengisa ezinje ngejeli yeqhwa, isigqumathelo sejel, ubuhlanti bamadolo esinqeni kunye neplanga yomkhenkce oshushu, iisokisi zonyango olubandayo, imifuno yokufudumeza i-microwave pad, ibhegi yezonyango enokubanda
esetyenziswa kunyango olushushu nolubandayo lokunyanga, ezempilo zezeMpilo, ezononophelo lomama nomntwana, njalo njalo. Sihambelana nomgaqo "wendalo oqhubekayo kunye nokwoneliseka kwabaxumi" kwaye ngokuthembekileyo siyathemba ukubonelela ngexabiso lokhuphiswano lobomi obunempilo.
Sinee-R & D zesebe lethu sinokwenza isiko kwiimveliso ngokwengcinga yakho, umatshini wokusika we-laser ukuqinisekisa ukumila ngokuchanekileyo, ukushicilelwa kwe-UV kunokwenza iipateni ezinemibala emininzi, isandla esenziwe ngumngundo senza ubomi bexesha elide kwiimveliso zakho, ukuphendula kwabasebenzi abangama-120 ngokuhanjiswa. Injongo yethu kukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu, ezingabizi mali kangako ngonikezelo olukhawulezayo kunye nenkonzo ebalaseleyo.
Zonke iipakethi zomkhenkce ziya kuvavanywa ngovavanyo kunye nokuzihlola phambi kwephakheji, ijeli engeyiyo ityhefu etywinwe kwi-PVC, i-EVA, i-TPU inokuvuza emva kobushushu okanye uxinzelelo, olubi kumava abathengi, umzi-mveliso wethu wenza konke oku kube phantsi kolawulo, impendulo zonke iipakethe zomkhenkce.
Isabelo sethu sokuThumela kwelinye ilizwe
Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd. izibophelele kwimveliso ezikumgangatho ophezulu iimveliso compress abandayo kunye eshushu. Inkampani iyabandakanyeka kuphuhliso lwemveliso, uphuhliso kunye nemveliso (yonke inkqubo inokusela ngokuthe ngqo amanzi acociweyo) kunye nentengiso. Ngomsebenzi onzima wabo bonke abasebenzi bezobuchwephesha kunye nabathengisi, inkampani ibonelele ngempumelelo inani elikhulu leemveliso ezibandayo nezishushu kubathengi ekhaya nakumazwe aphesheya.
Iimveliso zethu zithunyelwa ngaphandle kwihlabathi liphela, amazwe aphambili kunye nemimandla ngama-40% eYurophu, 30% eMelika, i-15% eJapan kunye ne-5% Korea, kunye ne-10% kwamanye amazwe okanye kwimimandla. Inkampani ibikhonza abathengi nge iimveliso ezikumgangatho ophezulu, ixabiso elifanelekileyo, ukufika ngexesha kunye negama elihle. Sinethemba lokuba sisebenzisana nabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya. Ngemizamo yabo bonke abasebenzi kwihlabathi liphela, siya kuba lishishini elikhokelayo kolu shishino kunye ngokudibeneyo ukudala ikamva eliqaqambileyo kubanda kwaye kushushu ishishini compress!
Amanye amazwe kunye nemimandla
Yiba lilungu losapho apha, banokuyonwabela indawo yethala leencwadi kunye nokuba sempilweni ukuze babe sempilweni ngokufanayo neemveliso zethu!
Wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu okanye umnquba wethu minyaka le kwiiFair kunye nemiboniso.
Yiba nentetho nathi, uyakufumana unyango olushushu nolubandayo lokunyanga imveliso yeepakethe!